Indonezia: Nahazo Fanohanana An-tserasera Ny Sampana Miady Amin’ny Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2012 10:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Voaporofo indray ny herin'ny fampahalalam-baovao sosialy tao Indonezia raha naneho ny fanohanany ireo mpanao famotorana momba ny kolikoly niharan'ny herisetran'ny polisy sy ny mpanao politika sasany ny mpiserasera.
Nanjary lasa fanentanana ivelan'ny aterineto ny fanohanana ny Vaomiera Miady Amin'ny Kolikoly (KPK) satria nikarakara hetsika famoriam-bahoaka ny mpiserasera mba hanohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy hanohitra ny fanambaran'ny Antenimiera hanalefahana ny fahefan'ny sampana miady amin'ny kolikoly.
Vahoaka marobe no nanameloka ny fihoaram-pahefana ataon'ny polisy amin'ny fanakanana ny KPK tsy hanatanteraka fanadihadiana momba ny kolikoly miseho eny anivon'ny biraom-panjakana.
Mpikatroka milanja afisy lehibe manohana ny asa iantsorohan'ny Vaomiera Miady amin'ny kolikoly ao Indonezia. Vaomiera ao Surabaya. Sary avy amin'i Robertus Pudyanto. Copyright Demotix (10/8/2012)
Fironana tao amin'ny Twitter ny tenifototra #SaveKPK izay nampiseho ny fanehoan-kevitra mamaivay avy amin'ny vahoaka manohana ny fahazoan-dalan'ny KPK mba hampiharihary sy hiampanga ny kolikoly misy eo anivon'ny governemanta. Anisan'ny tenifototra malaza hafa ampiasaina amin'izany ihany koa ny #dimanaSBY(Aiza ny filoha?) izay toa hita fa manery ny mpitondra Indoneziana mba hanome baiko ny polisy handrahona ny KPK. Ireto ambany ireto ny sioka sasany nampiasa ireo tenifototra roa be mpampiasa indrindra:
@dilakarinta Efa mba nosaininao ve hoe filoha am-perinasa no rahonan'ny lehiben'ny polisy ao amin'ny fireneny? Eny, tsy mila misaintsaina hafa intsony. #SaveKPK
@LarasaTita Miady amin'ny kolikoly ny #SaveKPK, ajanony ny fandrahonana. Mba zavatra tsara heverina. Indonezia mendrika ho an'ny zanantsika no tsinjovy!
@munahusin1 Ny kolikoly no fototry ny ratsy rehetra ato amin'ity firenena ity. Foano ny kolikoly! #SaveKPK
@rdungga Resadresaka momba ny tsy fisian'ny SBY sy ny vahoaka mamporisika ny Polisim-pirenena Indoneziana mba handray ny andraikiny no niseho androany maraina#dimanaSBY.
@farahwardani Fotoam-piasany fanindroany izao. Raha ny tena izy arak'izany, afaka manafana tsara ny sezany izy ary mahazo ny tombotsoa rehetra tokony ho azony hatramin'ny taona 2014. Sahiko ny mijoro fa toy izany no fomba fiheviny. #DimanaSBY
Mpivarotra Indoneziana mampiseho ny fanohanany ny KPK. Sary tao amin'ny pejy Facebook'ny Save KPK
Tanàna maro tao Indonezia no nanaovana ny famoriam-bahoaka ho fanohanana ny KPK. Nanamarika ny Projecting Indonesia fa ireo vahoaka manana fari-piainana antonony no tena nandray anjara tamin'izany famoriam-bahoaka izany, anisan'ny nanatrika izany koa ny mpanakanto:
…afaka manasongadina zavatra iray isika: nanjary mafàna fo sy mavitrika amin'ny politika ny vahoaka saranga antonony.
…Anisan'ny fitaratra amin'ny Indoneziana sokajy antonony izy ireo izay nanjary mavitrika amin'ny resaka politika ankehitriny (na dia tsy ilaina aza ny miditra antoko politika). Farafaharatsiny, lasa marobe ireo vahoaka saranga antonony miandrandra ny fireneny mba ho tafala amin'ny kolikoly.
Nanazava ireo olana roa nahatonga ny fahatezeram-bahoaka i Hardjanto Soebdjantoro:
Antony lehibe anankiroa mikasika ny KPK no nahatonga ahiahy sy fahatezerana teo amin'ny vahoaka. Ny voalohany dia ny fikasan'ny mpanao lalàna hikitika ny lalàna laharana faha-30/ 2002 momba ny KPK ary ny faharoa dia ny fikasan'ny polisy hisambotra ilay mpanao famotorana ao amin'ny KPK. SAVE KPK
Hatreto, mpisera Facebook maherin'ny 18.000 no nanao “tiako” ny pejy Facebook Save KPK.